Iindaba zesiXhosa, 08 eyeNkwindla 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 08 eyeNkwindla 2019
Written by Ashia Nkontsa on 08/03/2019
Izikolo zaseMfuleni zivaliwe kulentsasa
Zivaliwe izikolo ngalentsasa kumandla wase Mfuleni emva kokuba umbutho wabafundi i Cosas kuzwelonke ugunyazise ukuba abafundi bangayi esikolweni. Oku kubangelwa yinto abayichaze njengokungakhathali kwesebe lezemfundo leli phondo nanjengoko lingaqashanga otitshala abasigxina kwizikolo ezibini ezitsha ezikulamandla. Inkokheli yabahlali umnumzana Sipho Delana uthi bazakuqhubeka nokuvingca nezinye izikolo kwezinye indawo ngomvulo weveki ezayo.
Kuphuculwe iinkonzo zezempilo eGrabouw
Ubhengeze iqhinga buchule lokuphucula iinkonzo zezempilo eGrabouw eOverberg umphathiswa wezempilo kwiphondo leNtshona Koloni unkosazana Nomafrench Mbombo. Oku kulandela iziganeko zoqhankqalazo labahlali olunyanzelise ukuvalwa kohola wendlela uN2 ngomvulo wale veki. Abahlali bebegqushalazela into abayibiza ngokuba ziinkonzo zempilo ezif’amanqe. OkaMbombo uthi iqhinga buchule lokuphucula imeko liquka iinkonzo ezingxamisekileyo zeeyure ezingamashumi amabini anesine kananjalo kusekwe iqela labantu abasibhozo elixakathiwe uxanduva lokuququzelela le nkqubo. Abahlali balamkele olu ngenelelo kambe bekwamemelela ukwakhiwa kwesibhedlele esitsha kulaa mmandla.
Liphambili kuluhlu igama Mam’uMadikizela Mandela
Igama legqala lenkululeko lelizwe loMzantsi Afrika uMama uWinnie Madikizela Mandela liphambili kuluhlu lalawo agxeleshelwe ukuthiywa ngokutsha kwesikhululo seenqwelontaka samazwe ngamazwe saseKapa. Oku kudizwe lilungu lesigqeba esiphezulu seANC uNocawe Mafu kwindibano yamanina eshukuxa umgaqo-nkqubo wezesini kweli lizwe. Wongeze ngelithi elinye igama elikolu luhlu lelikaMama Albertina Sisulu. Oku kuza emva kokuphanza kweenzame ze-EFF zokufuna indlu yowiso-mthetho ithabathe isigqibo sokuthi esa sikhululo ngegama likaMam’uWinnie. I-ANC ixhaswa yi-DA epalamente ivote ngelithi makulandelwe inqkubo esele imiliselwe nekhokelwa yinkampani yezikhululo zeenqwelontaka zeli lizwe i-ACSA. Ukanti i-ANC ithi icace okwekati emnyama icondoba ekhephini eyokuba i-EFF ifuna nje ukunyiba amanqaku ezopolitiko ngegama likaMama uWinnie.
uRamaphosa uzimisele ukulwa urhwaphilizo
Umongameli Matamela Cyril Ramaposa uthi urhulumente wakhe uzimisele ukusiphula neengcambu urhwaphilizo kwanokuphelisa nya ukubanjwa ngesixhanti kukarhulumente. URamaposa ukuthethe oku ngethuba ephendula imibuzo epalamante malunga nokwenziwayo ngurhulumente ngezityhilelo ezanekwa kwikomishoni kaZondo. Ilungu lepalamente leEFF uNazier Paulsen uxelele umongameli ukuba kukho amalungu ekhabhinethi yakhe adizwe njengabandakanyekayo kwizenzo gwenxa kodwa noko kunjalo akukho nyathelo alithabathayo ngakuwo. Umongameli uyiqinisekisile le nqeberhu esithi bazakudibana nenyok’iphung’umhluzi onongiweyo ababandakanyeka kwiziphumo zale komishoni njengabaxhaphileyo lurhwaphilizo.
I-DA ilwelwa imali ezokufakwa kuEskom
Iqela eliphambili kwaphikisayo kwilizwe loMzantsi Afrika i-DA ithi isigqibo sequmrhu lezamandla lelizwe loMzantsi Afrika i-Nersa sokuvumela u-Eskom enyuse ixabiso lombane ngo13.8 weepesenti kule minyaka mithathu siyindlela nje yokwenza imbuyekezo kubarhwaphilizi beANC. Ukwenyuka kwexabiso lentengo yombane kuzakuqalisa kwinyanga ezayo. Ukanti, ikomishoni kaZondo ive iingxelo eziliqela malunga norhwaphilizo lakwaEskom ingakumbi kumbandela wezivumelwano zentengo yamalahle nenkampani yakwaGupta. Usinga-mphathiswa weDA kumashishini karhulumente unkosazana Natasha Mazzone uthi abemi beli lizwe batsala nzima ngenxa yemali yerhafu ebangelwa bubuheshe-heshe bolawulo lweANC,ubuqotha-qikili,urhwaphilizo nenkcitho gwenxa kumaqumrhu karhulumente afana no-Eskom. UMazzone uthi u-Eskom makajongane nokubuyiswa kwemali ayityalwayo ahlukane nokuntlonta abathengi ngentlawulo ebaxekileyo.
i-PAC ibuyisa umanyano ukugcina imbali yayo
Elinye lamaqela ezopolitiko awayephambili kwidabi lenkululeko nebelikhe labonakala njengeliphanzayo kule minyaka idlulileyo i-PAC lithi alikho kwinyathelo lobumbano ngenxa yolonyulo koko kungenxa yokugcina imbali yeli qela. Amacala amabini abengaboni ngasonye kulo mbutho avumelene ukuba amanyane kwindlela esingise kulonyulo jikelele lenyanga kaCanzibe kulandela isigwebo senkundla ephakamileyo yoMtlaGauteng. Amalungu ePAC ebesoloko exhithwana malunga nokuba ngubani eyona nkokheli yokwenene yeli qela.